Dakota Fanning – Cast – Burmese Subtitle
Once UponaTime… in Hollywood (2019) တဈခါတုနျးက ဟောလိဝုဒျမှာ ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျလေးကို တငျပေးလိုကျပါတယျ။ဒါကတော့ ရုပျရှငျ ၁၀ ကား ရိုကျပွီးရငျ အနားယူပါတော့မယျဆိုတဲ့ ဂန်ဓဝငျဒါရိုကျတာကွီး ကှငျတငျ တာရနျတီနိုရဲ့ ၉ ကားမွောကျရုပျရှငျပါပဲ။အရငျရှဈကားကတော့ Django Unchained (2012) … The Hateful Eight (2015) … Death Proof (2007) …Inglourious Basterds (2009) … Reservoir Dogs (1992) … Kill Bill: Vol. … Kill Bill: Vol. … Jackie Brown (1997) ဆိုတဲ့ကားတှပေါပဲ။ ဒီရုပျရှငျကတော့ ဟောလိဝုဒျခတျေဟောငျးကို ပွနျတမျးတဖို့ သရုပျဖျောထားတဲ့ ရုပျရှငျပါပဲ။ခတျေဟောငျးကောငျးဘှိုငျကားအကွောငျးတှေ၊ ဟောလိဝုအထာတှေ၊ အဲဒီခတျေရဲ့ ဟဈပီတှနေဲ့ ပုံဖျောထားတာပါပဲ။လီယိုနာဒို၊ ဘရကျပဈ၊ မာဂေါ့ ရျောဘီ တို့ အဓိက ...
The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part2(2012) After the birth of Renesmee, the Cullens gather other vampire clans in order to protect the child fromafalse allegation that puts the family in front of the Volturi.
The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011) The new found married bliss of Bella Swan and vampire Edward Cullen is cut short whenaseries of betrayals and misfortunes threatens to destroy their world.
IMDB: 4.9/10 209,450 votes
The Twilight Saga: Eclipse (2010) Bella once again finds herself surrounded by danger as Seattle is ravaged byastring of mysterious killings andamalicious vampire continues her quest for revenge. In the midst of it all, she is forced to choose between her love for Edward and her friendship with Jacob, knowing that her decision has the potential to ignite the ageless struggle ...
IMDB: 5.0/10 212,642 votes
The Twilight Saga: New Moon (2009) Forks, Washington resident Bella Swan is reeling from the departure of her vampire love, Edward Cullen, and finds comfort in her friendship with Jacob Black,awerewolf. But before she knows it, she's thrust intoacenturies-old conflict, and her desire to be with Edward at any cost leads her to take greater and greater risks.
Coraline (2009) မိသားစုသုံးစုလောက် နေလို့ရတဲ့ ပန်းရောင်ရဲတိုက်ကြီးသို့ မိသားစုတစ်စုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ် ရဲတိုက်ရဲ့မူလပိုင်ရှင်က ကလေးရှိတဲ့မိသားစုကို အခန်းငှားခွင့်မပြုပေမဲ့ ရဲရင့်စူးစမ်းတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက် သူ့မိသားစုကို ငြူစူရင်း လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ ကလေးမလေးနာမည်ကတော့ ကိုရာလိုင်းပါ အဲဒီညမှာပဲ သူမဟာ အိမ်ထဲမှာ တံခါးပေါက်သေးသေးလေးရှိတာကို သတိထားမိပြီး ဝင်သွားမိတဲ့အခါမှာတော့ ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ မွေ့လျော်နေတဲ့ ကိုရာလိုင်းတစ်ယောက် ကြောင်တစ်ကောင်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့မိပြီး မထင်မှတ်တဲ့ အန္တရာယ်ဆိုးကြီးကို သတိပြုမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့…။ 2009 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Coraline ရုပ်ရှင်ဟာဆိုရင် Nail Gaiman ရဲ့ ဝတ္တုကိုအခြေခံထားပြီး stop-animation တွေထုတ်လုပ်နေကျ LAIKA production ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းတွေကြောင့်လဲ အကယ်ဒမီဆုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Animation ပေမဲ့ရယ်စရာမဟုတ်သလို ဗြုန်းကြီးထိတ်လန့်စရာမျိုးလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ ရင်ဖိုကျောချမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းအေးပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ညမျိုးလေးမှာ ခံစားကြည့်ရှုဖို့အသင့်တော်ဆုံးပေါ့ဗျာ။ Review Credit to MMSubtitles
IMDB: 7.7/10 178,450 votes
War of the Worlds (2005) ချစ်လှစွာသော ဒါရိုက်တာကြီး Steven Spielberg နဲ့ သိပ်တော်တဲ့မင်းသား Tom Cruise တို့ တွေ့ဆုံထားတဲ့ နောက်ထပ် Sci-fi ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် အော်စကာ၃ဆုအတွက် ဆန်ကာတင်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့ တစ်ဆု မှတော့မရခဲ့ပါဘူး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Ray Ferrier (Tom Cruise) က အိမ်ထောင်ကွဲနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကရိန်းကွန်တင်နာ အော်ပရေတာအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပါတယ် Ray က ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်လို့ သူ့ဇနီးဟောင်းက ကွာရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Robbie ဆိုတဲ့သားနဲ့ Rachel ဆိုတဲ့ သမီးငယ်လေးတစ်ယောက်တို့ရှိပါတယ် တရက်မှာတော့ Ray ရဲ့ဇနီးဟောင်းက သူ့ခင်ပွန်းအသစ်နဲ့ ခရီးထွက်စရာရှိလို့ သားနဲ့သမီးကို Ray ဆီခဏလာထားပါတော့တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့ လျှပ်စီးမုန်တိုင်းတစ်ခုက မြို့ပေါ်ကျရောက်လာပြီး ကမ္ဘာခြားက ဂြိုဟ်သားတွေဝင်ရောက်လာပါတော့တယ် လူသားမျိုးနွယ်ကို နယ်ချဲ့မဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေရန်ကနေ Ray တို့မိသားစု လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား ဒီဇာတ်ကားထဲက Ray ရဲ့သမီး Rachel နေရာသရုပ်ဆောင်ထားသူလေးက ဒီနေ့ခေတ်မှာ သိပ်ကိုချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ မင်းသမီးလေး Dakota Fanning ပဲဖြစ်ပါတယ် အညွှန်းကိုတော့ mmsubtitle ...
IMDB: 6.5/10 377,169 votes